Goobaha Khadka Tooska ah ee Faransiiska - Koodhadhka Khadka Tooska ah ee Khadka Tooska ah
(235 votes, celcelis ahaan, 4.99 out of 5)
Loading ...Waxaa la yaab leh, Paris iyo hareeraheeda ku dhow ma jiraan wax khamaar ah. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in sharciga Faransiiska ee hadda jira, casinos waxaa la dhigi karaa oo keliya meelaha si rasmi ah looga helay xaaladda dalxiiska waxayna ka yimaadeen Paris, masaafo ka badan 100 kiiloomitir. Waxa kaliya ee ka reeban waa casino ku yaal Engen. Goobtan dalxiis waxay ku taal 14 km u jirta Champs Elysées. Kasiinooyinka furan ee 'Engen-les-Bains' waxay ahaayeen 1901. Kadib 10 sano, waxay ahayd tiyaatarka la furay, xilliyada dagaalkana isbitaalku halkaan ayuu ahaa. Sannadkii 1988 waxaa iibsaday Groupe Lucien Barrière. Sannadkii 2001-kii dhismaha ayaa gebi ahaanba dib loo dhisay, isla markaana khamaar cusub ayaa la furay bishii Abriil 2002. Gudaha Casino waxaa loogu talagalay naqshadeeyaha caanka ah Jacques Garcia. Wuxuu qurxiyay ilaha iftiinka casino, saqafka xiddigo, harooyinka iyo agab raaxo leh. Ilaa hadda, xarun khamaaris oo ku taal Engen - waa naadiyada ugu faa iidada badan Faransiiska. Waxay leedahay jaantusyo loogu talagalay turubka isboortiga, blackjack, iyo sidoo kale Ingiriis iyo roulette Faransiis iyo ciyaaro kale. Waxa kale oo jira mishiinno lagu ciyaaro.
Aasaaskii ugu horreeyay ee khamaarka ee Faransiiska ayaa laga furay magaalada Paris qarnigii 17aad. Dhacdadani waxay door muhiim ah ka ciyaartay horumarinta warshadaha khamaarka, kaliya ma ahan Faransiiska laakiin adduunka oo idil. Marka hore, khamaaristu waa hab lagu buuxiyo khasnadda dawladda, faa'iidada dhaqaale ee jiritaanka hay'adahaas ayaa muuqatay, sidaa darteed, waxay bilaabeen inay u muuqdaan casaan cusub. Ka dib Kacaankii Faransiiska, casino waa mamnuuc, ka dibna markale caan ah. Ciyaartoyda ugu horreeya ee casino waxay ciyaari karaan kaliya tiro kooban oo khamaar iyo roulette, laakiin horumarka warshadaha khamaarka ayaa ballaariyay noocyada khamaarka la bixiyo. By habka, hadda wuxuu ku raaxeeyaa caan caan ah sida roulette ayaa la ikhtiraacay, sida laga soo xigtay taariikhyahannada badankood, waxay ku jirtay Faransiiska. Astaamteeda astaamaha ee Blaise Pascal, falsafada, iyo xisaabta taas oo ka shaqeysa soo saarista dhaqdhaqaaqa joogtada ah.
Qaar ka mid ah hay'adahaas waxaa ka mid ah casino Barrièrede Deauville, oo ku yaal magaalada Deauville. Taariikhda casino waxay leedahay ku dhowaad 150 sano. Waxaa la helay 1864, waxay ahayd bilawgii Duc de Morny, laakiin ganacsiga khamaarka ayaa xumaa waana la xiray. Daahfurka cusub ee hay'adani wuxuu horeyba uga dhacay 1912. Isaga, waxaa loo dhisay dhisme cusub oo ku habboon dhaqanka naqshadaha Athenia, dhismahan wuxuu ku yaalaa xilligan. Kaniinadan ayaa noqotay meel ay ugu jecel yihiin kareemka bulshada Faransiiska iyo Ingiriiska, iyo sidoo kale ganacsato badan iyo dad caan ah. Xarumahan ciyaaraha - calaamad u ah xarrago Faransiis iyo raaxo. Maanta, machadku wuxuu leeyahay adeer Lusena Barrier, kaas oo loogu magac daray sharafta aasaaska khamaarka. Kaniinadani waxay leedahay qaddar badan oo khamaar ah: 325 mishiinno naadi iyo 24 miisas ciyaaro oo loogu talagalay ciyaaraha Punto Banco, Roulette, Blackjack, craps, iyo kuwa kale. Waxa kale oo jira saddex baarar, saddex maqaaxiyo, diyaafad iyo tas-hiilaad shirar, hudheelka toddoba boqol oo kursi Si aad u tagto casinos waxay u baahan tahay inaad soo bandhigto dukumeenti aqoonsi ah oo aad uga qayb gasho ciyaaraha miisaska waa inaad marka hore iska diiwaangelisaa.
Casino «LE LYON VERT» waxaa la furay 1882, 1991-na wuxuu bilaabay inuu ka tirsan yahay kooxda Partouche. Waxay ku taal Lyon. Aasaasiddan khamaaristu waxay ka kooban tahay hoolal waaweyn oo qamaar, maqaaxiyo iyo hudheel yar. Khamaarahan sida xarumaha kale ee khamaarka ee Faransiiska, waxaa jira tiro aad u badan oo ah mashiinno ciyaaro ah: video poker, waxaa jira 174 iyo 224 oo dhigaya boosaska farsamada. Waxa kale oo jira fursad lagu ciyaaro roulette-ka Mareykanka iyo Yurub, Texas Hold'em poker, blackjack iyo ciyaaro kale oo fursad ah. Inta lagu jiro nasashada, waxaad fadhiisan kartaa makhaayadda, adigoo ku raaxeysanaya cunnada wanaagsan.
Casino Aix-en-Provence, oo loo yaqaan 'Pasino', waxaa la furay sanadkii 1923. Dhismaheeda wuxuu noqday mashruuc ballaaran oo dib-u-habeyn magaalo ah oo ay soo saartay Dowladda Hoose. Mashruucu wuxuu ka koobnaa guriga khamaarka, isbitaalka kuleylka, daar weyn iyo baarkinka quruxda badan. Casino Pasino wuxuu ciyaari karaa ciyaaro kala duwan oo nasiib ah, oo ay ku jiraan fursad uu ugu ciyaaro mashiinnada mashiinnada, fiidiyowga fiidiyowga, roulette iyo fiidiyow, marka lagu daro, noocyo badan oo kaararka kaararka ah iyo madadaalo kale. Waxaa si joogto ah loo qabtaa nashaadaadyo madadaalo oo badan, oo ay ku jiraan riwaayado kala duwan iyo riwaayado, riwaayado masraxa ah.
Toddoba iyo tobanka casino ee ugu weyn Faransiiska, wuxuu ku fadhiyaa aag dhan 650 mitir murabac, wuxuu u muuqdaa mid cabirkiisu le'eg yahay, iyo sidoo kale madadaalo iyo qurxin qurxoon oo qurxin iyo qurxin gudaha ah Waa lala barbar dhigi karaa quruxda dheeman. Waxay loola jeedaa jiil cusub oo xarumo khamaar ah. Gudaha gudaha fikradda casinos waxay saameyn ku yeelatay sheeko xariirooyinka Roald Dahl ee "Charlie iyo Warshad Shukulaatada." Kasiinadu ma ciyaari karto oo keliya ciyaaro fursad lacag ah, laakiin sidoo kale waxay ku raaxeysan kartaa noocyo kale oo madadaalo ah.
Casino «Cannes Croisette» oo ku taal bartamaha xafladaha caanka ah ee Palais des Festivals ee ku yaal Cannes, ayaa leh koox Lucien Barrière. Wadarta guud ee aasaaska ciyaarta waa 3,000 mitir murabac. Qolalka ciyaarta waxaa lagu qurxiyaa qaab casri ah. Hoolalka casino waxaad ku ciyaari kartaa ciyaaro sida turub, blackjack, roulette, baccarat iyo mashiinno naadi halkaas ah. Agagaarka Casino waxaa ku yaal baarar dhowr ah, makhaayad gastronomic ah iyo goob lagu caweeyo. Qol ayaad ka ballansan kartaa hoteelka.
Waa inay dhahdaa "Paris" iyo "Eiffel Tower", maadaama wadno badani bilaabaan inay si dhakhso leh u garaacaan oo mala awaalku uu sawirayo sawir jacayl ah. Maanta CasinoToplists waxay booqan doonaan dhulka jacaylka iyo xorriyadda - Faransiiska. Marka, in si kooban loo qeexo odhaah caan ah, hawsheennu maanta waa “inaan aragno Paris oo aan ciyaarno.”
Faransiiska - ereyo kooban oo ku saabsan taariikhda iyo juqraafiga;
Faransiiska - waa dal soojiidasho leh oo ku yaal Galbeedka Yurub waxaa soo maray waqtiyo badan oo adag, laakiin wuxuu isu beddelay mid ka mid ah kuwa ugu raaxada iyo nabadgelyada badan adduunka. Magaca buuxa ee gobolka - Jamhuuriyadda Faransiiska. Faransiiska gudaheeda, xuquuqda dadyowga iyo qaranku waxay gaar u tahay dadka. Hal ku dhig - "Xorriyad, Sinnaan, Walaalnimo."
Madaxa gobolka waa madaxweynaha, Francois Hollande, laakiin awoodo badan ayaa leh Ra'iisul Wasaaraha Manuel Valls. Maanta, in ka badan 66 milyan oo qof oo ku nool Faransiiska, kuwaas oo 90% ay yihiin - muwaadiniinta waddanka. Isku-darka qaranku waa mid midabo badan oo kala duwan, inkasta oo xaqiiqda ah in Faransiisku uu xukumay. Waxaa jira dad badan oo Alsatiyiin ah, lotaringtsev, British, Yuhuud, Flemish, Catalans, Basques, Corsicans, Armenians.
Caasimadda Faransiiska - Paris qurux badan, oo, sidaad ogtahay, inaad aragto oo aad nabad ugu dhimato. Taariikhda magaalada casriga ah, oo hoy u ah ku dhowaad 2.5 milyan oo qof, waxay bilaabatay qarnigii III BC. e. Tani waa xarun dhaqameed, taariikhi, dhaqaale iyo siyaasadeed oo aad u wanaagsan, oo ku quruxsan quruxdeeda iyo soo jiidashada weyn.
Faransiisku wuxuu sifiican ula jeedaa xididka khamaarka ee muwaadiniintiisa iyo booqdayaasheeda, ee ku yaal aagag badan oo casinos iyo guryo khamaar ah, laakiin sidoo kale qawaaniinta ururkooda oo aad u adag Aynu baarno.
Faransiiska - waa mid ka mid ah waddamada ugu halista badan adduunka, iyo Faransiiska - waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu quusta xun. Khamaar badan ayaa halkan ka dhacay.
By habka, inta badan casinos ee adduunka, xitaa canshuuraha lagu bixiyo maqaalka sida "Ciyaarta Faransiiska." Mid ka mid ah noocyada roulette waxaa sidoo kale loo yaqaan "French Roulette" (oo sidoo kale loo yaqaan European Roulette); iyo noocyada roulette, naimenshee faransiisku wuxuu leeyahay faa iidada casino, taas oo aan ka baaqsan karin inay ka farxiso taageerayaasha ciyaarta.
Sida wadamada Yurub badankood, Faransiiska, dabeecad gaar ah oo ku saabsan khamaarka. Way sharciyeeyeen, laakiin waxaad ku ciyaari kartaa oo keliya meelaha sida gaarka ah loogu talagalay. Kasiinada ayaa laga furayaa laga bilaabo 1942 kaliya meelahaas kuwaas oo leh xaalad degsiimo rasmi ah, laakiin waa in laga saaraa Paris oo aan ka yarayn 100 km.
Kahor ansaxinta sharciga dalka wuxuu ahaa guryo aad u tiro badan oo qamaar, kuwaas oo intooda badan ay ahayd in la xiro. Maanta si rasmi ah ayey u shaqeysaa 197 casinos, dhammaantoodna waxaa maamula Wasaaradda Arrimaha Gudaha. Xakamaynta hay'adaha, habka ciyaarta iyo adeegga lagu rakibay wax ka daran.
Go'aanka ku saabsan furitaanka casino cusub wuxuu siinayaa shaqsi gaar ah wasiirka arrimaha gudaha, laakiin ruqsadda ugu horreysa waxaa lagu soo saaraa heer degmo, oo ay ansaxisay Guddiga Xakamaynta. MIA waxay qeexaysaa liiska ciyaaraha ee machadka xulashada gabi ahaanba shaqaalaha.
Sannadkii 1986 xeerar gaar ah ayaa khuseeya booqashada ayaa loo oggolaaday gelitaanka haweenka. Shaqaalaha looma oggola inay keenaan casino si ay uga shaqeeyaan lacag caddaan ah ama jajab, in sharcigan la arkay, tollay dhar gaar ah oo aan lahayn jeebado. Faransiiska dhexdiisa, waad ka ciyaari kartaa laga bilaabo da'da 18 sano jir. Guri kasto kasta waxaa ku yaal liis madow, kaas oo dejin doona Schuler, guuldareyste iyo ludomany (magacyadooda waxay xaq u leeyihiin qaraabada), iyo martida kale ee aan la soo dhaweyn.
Kasiinooyinka ku yaal Faransiiska kaliya maahan astaamo maxalli ah, laakiin sidoo kale waa ilo dhaqaale oo adag. Sannad kasta, miisaaniyadda waxay heli jirtay boqollaal milyan oo yuuro. Canshuuraha horusocodka ah ee xarumaha, faa iidada ayaa ka sareysa 9.5 milyan oo euro, waa boqolley aad u badan - 80. Kaliya mashiinada ayaa abuuraya 50% dakhliga, kaararka - qiyaastii 40%, inta soo hartay waxay ku dhacaysaa miiska roulette.
In kasta oo si rasmi ah looga dhigo Paris, waxaa jira casino, waxaa jira weli kooxda Dammaanadda Duulinta de France , taas oo u saamaxday ciyaaro qaar, sida turub, baccarat iyo backgammon. Tani waa mid ka mid ah xarumaha ugu raaxada badan ee dalka, oo la furay sanadkii 1907. Had iyo jeer waxaa jira si adag u hogaansanaanta nidaamka lebiska. Si aad gudaha ugu soo gasho, hubi inaad ka gudubto xakamaynta wajiga, oo ay ku jiraan hubinta dharka, dhig kaarka naadiga. Waxaad sidoo kale u gudbin kartaa casuumaadda qofka heysta kaarka. Sannadkii 2005 waxaa dhacay World Poker Tour, sharafkan ayaa ah kan ugu fiican kan ugu fiican.
Ka reebitaan kale - khamaarigan Enghien , waxay Paris u jirtaa oo keliya 14 km. Engen waa meel qurux badan oo xeebta loo dalxiis tago oo ku taal xeebta harada, saacadduna waa 10-ka ilaa 4-ta habeen. Waa ciyaar iskuxir leh makhaayado, hudheelo, tiyaatar iyo naadi isboorti. Waxay halkan uyimaadaan inay ku ciyaaraan roulette, ciyaaro kaladuwan oo kaladuwan iyo 450 nooc oo mishiinno mishiin ah.
Waxay leedahay qamaar gaar ah oo khamaar leh Megève , oo ku taal Mont Blanc. Kaniisadan waxay si kalsooni leh u haysaa hoggaanka xagga dakhliga. Tani maahan wax la yaab leh, maxaa yeelay waxay ku wareegsan tahay dabeecad qurux badan, waxay bixisaa oo keliya fasax khamaaris, laakiin sidoo kale fursad ay ku qaadato waqti diskooga, baararka biyaano ama makhaayadda.
De Deauville Barrière - casino ugu fiican, oo ku yaal aagga xeebta. Waxay ku taal meel ka soo horjeedka xeebta halyeeyga ah ee filimka "Nin iyo Naag" Lelouch. Meeshan waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan Faransiiska.
Eiffel Tower. Cinwaanka: Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France. Waa astaamaha Paris iyo Faransiiska - intaas oo dhan ayaa leh.
Gawaarida Gawaarida. Cinwaanka: Dhig Charles de Gaulle. Qaab-dhismeedka qadiimiga ah ee sharafta leh, oo lagu dhisay amarka Napoleon si loogu aqoonsado guulaha waaweyn ee uu gaadhay.
Louvre. Goobta: Palais Royal. Mid ka mid ah matxafyada ugu waaweyn Yurub, oo ku yaal Daarta Boqortooyada.
Notre Dame de Paris. Cinwaanka: 6 Parvis Notre-Dame - Booska Jean-Paul II. Qalbiga ruuxiga ah Parida iyo basilica qurux badan oo katoolik ah.
Jardiinooyinka Luxembourg. Cinwaanka: 6e Arrondissement. Qasriga weyn iyo dhismaha baarkinka, kuna jiifa 26 hektar.
Magaca dalka “Faransiiska” wuxuu leeyahay asal ahaan asal ahaan Jarmal, wuxuu ka yimid magacyada qabiilooyinka Franksku degenaayeen aagga. In kasta oo dadka oo dhami ku hadlaan luqadda oo ay leeyihiin Romanesque inta badan asal ahaan Gallo-Roman, magaca ayaa yimid sababtoo ah luqadda Jarmalka.
Faransiiska, qalcadihii ugu waaweynaa adduunka - 4969.
Waxay ku jirtay gudaha Faransiiska oo ay soosaartay shineemo, baaskiil, ballet, chanson, Gothic.
Faransiiska - Xarunta Beerta Yurub.